Maxay mucaaradka uga gaabsadeen taageeradii iyo garab istaagii Cabdi Xaashi? - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Maxay mucaaradka uga gaabsadeen taageeradii iyo garab istaagii Cabdi Xaashi?
Maxay mucaaradka uga gaabsadeen taageeradii iyo garab istaagii Cabdi Xaashi?
Midowga Murashaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya, Golaha Badbaadinta Qaranka iyo Madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa ku keli yeelay dagaalka uu Villa Somalia kula jiro guddomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Cabdi Xaashi oo garab weyn ka heystay dhinacyadaan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay si keli ah ula daala dhacayay xiisada u dhaxeysa isaga iyo Mahdi Guuleed oo ay gadaal ka taagan tahay Villa Somalia. Ma cadda sababta rasmiga ah, hase yeeshee waxaa muuqata in ay uga baxeen dagaalkii wadajirka ahaa ee ka dhanka ahaa Qorshaha Villa Somalia.
Xasan Sheekh Maxamuud, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Axmed Madoobe iyo Saciid Deni waxay ahaayeen garbihii ugu muhiimsanaa ee uu ku duuli jiray Cabdi Xaashi oo culeys ka tan badan kala kulmaya Villa Somalia. Dhamaan mas’uuliyiinta aan soo sheegnay ayaa hadda meesha ka baxay, mana cadda sababta rasmiga ee keentay.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa qaba in mucaaradka ay aaminsanyihiin in aysan waxba ka qaban karin arrimaha taagan, sidaas darteed ay door bideen in aysan ka hor imaanin talaab kasta si aan cadaawad kale loogu qaadin, ama aysan Rooble ugu sii riixin dhanka Villa Somalia.
Xubnaha mucaaradka ayaa soo dhaweeyay natiijada doorashadii ka dhacday Baydhabo ee Aqalka Sare oo laga reebay xubno xisbiyadooda ka tirsanaa, iyagoo sidoo kale ka aamusay doorashadii shalay ka dhacday Teendhada Afisyooni, taasoo ka dhigan in ay gaabsadeen mas’uuliyiinta mucaaradka ah.
Dhinaca kale, waxaa jira warar sheegaya inay kala durqeen Mahdi Guuleed iyo Villa Somalia, sidaas darteedna ay yaraatay walaaca ay mucaaradka ka qabeen Mahdi Guuleed, taasi oo horseeday inaysan dhex-galin xiisadda siyaasiyiinta gobollada waqooyi.
Lama oga talaabada uu qaadi doono Guddoomiye Cabdi Xaashi oo habeen hore u gar dhigtay shacabka Soomaaliyeed kadib markii uu wax ka waayay madaxda qaranka, isagoo si aad ah u eeday madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Rooble.